Ukuseta kunye nokusebenzisa i-Handoff kuYosemite nakwi-iOS 8 | IPhone iindaba
Ukuseta kunye nokusebenzisa i-Handoff kuYosemite nakwi-iOS 8
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, iOS 8
Ngoku sonke sikhupha inkqubo entsha yokusebenza kwe-OS X, Yosemite, singasebenzisa imisebenzi ethile evumayo Ukuqhubeka komsebenzi phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo. I-Handoff ngumsebenzi ekuvumela ukuba uqale umsebenzi, ulandele kwi-iPad kwaye uwugqibe kwi-Mac.
Iziseko kukuba kufuneka sibe nazo iOS 8 kwi-iPhone nakwi-iPad (ingxelo yokugqibela) kunye Yosemite kwiiMacs. Kuzo zonke kufuneka ubhalise kwi I-ID efanayo ye-Apple, okanye yintoni efanayo, ukuba unayo iakhawunti efanayo ye-iCloud kwaye ifayile ye IBluetooth ivuliwe. Inqaku lokugqibela kubalulekile ukuba ulikhumbule, kuba kwi-iMac, izixhobo esele zisenza ukuba sidityaniswe yi-BT, kodwa kwiiMacBooks nakwi-iOS, sihlala sicime ibluetooth.
Ngoku isebenza nezicelo zeApple ezinjengeMeyile, Abafowunelwa, iKhalenda, iSafari, izikhumbuzo, Imiyalezo, iiMephu, amaPhepha, amanani, kunye neKeynote. Abaphuhlisi banokongeza ukuqhubeka kokusebenza, kodwa namhlanje sigxile ekumiliseleni ukusebenzisa nayiphi na kwezi zinto zingasentla.
Ngokubhekisele kwizixhobo zeHardoff ukuze zisebenze, kufuneka ube neMac, iMacBook Air, iMacBook Pro ukusukela ngo-2012 okanye kamva, okanye iMac Pro ukusukela emva konyaka ka-2013. , I-iPad mini, i-iPad mini kunye nokubonisa iRetina, kunye ne-iPod touch (isizukulwana sesi-5).
Abanye inzuzo Bafuna iimeko ezithile kwaye abanye baya kuba neentlawulo kwiinkampani zeefowuni, ezinje ngeminxeba okanye ngeSMS.
I-Handoff ifuna isixhobo se-iOS esine-iOS 8.
Iifowuni zifuna i-iPhone ene-iOS 8.
I-iPhone ene-iOS 8.1 iyadingeka kwiSMS.
IHotpot ekhawulezileyo ifuna i-iPhone okanye i-iPad enonxibelelwano lwedatha kunye ne-iOS 8.1. Jonga kumsebenzisi wakho ubukho bale nkonzo.
Khumbula ukuba ifuna:
Iakhawunti efanayo iCloud
Bluetooth yenziwe yasebenza.
Izixhobo kufuneka zibe ngaphakathi komda we iimitha ezilishumi kunye.
Masiye kwi iPhone kwaye silandela indlela: Useto > ngokubanzi > Handoff kunye nezicelo ezicetyiswayo kwaye sijonga ukuba siyasebenza na Susa isandla.
Masiye eMac, siyavula Ukhetho lwenkqubo > ngokubanzi kwaye siyaqinisekisa ukuba siyisebenzisile ithebhu evumela ukusetyenziswa kwe Susa isandla.
Ukuze i-Handoff isebenze, isixhobo ebesisebenza ekuqaleni kufuneka sibe iyasebenza kwaye ayivuli. Umzekelo, ukuba ujonga iphepha lewebhu kwi-iPad kunye ne-iPad evala ngokuzenzekelayo, ngekhe uqhubeke nokusebenza kwi-Mac okanye kwi-iPhone ngaphandle kokuvuka kunye nokuvula i-iPad kuqala.
Ngolwazi oluthe vetshe malunga imisebenzi yokuqhubeka, uneempawu ezithile zokuqala kwifayile ye- Iwebhusayithi yeApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 8 » Ukuseta kunye nokusebenzisa i-Handoff kuYosemite nakwi-iOS 8
UDaniel rhoqo sitsho
Ngaba ukuqhubekeka kuyakusebenzela ukusuka kwi-mac ukuya kwi-ipad kwaye kungenjalo?
Phendula kuDaniel Constantino
phakathi kwe-imac phakathi ko-2011 kunye ne-iphone 5s ye-iOS 8, Iifowuni zindisebenzele okomzuzwana kwaye azange ndiphinde…. Ndingatsalela umnxeba ndisuka "kubafowunelwa" kwaye ndibafumane kwi-iMac….
Ngaba kufuneka ICloud isebenze? ibluetooth ibiyicimile xa isebenza… .. (kunye neWIFI kwithiyori ngokwaneleyo)
Andazi ukuba kutheni ingasebenzi…
Isikhokelo esingcono nceda…. oku kwenzeka kubantu abaninzi !!!
Oku kwenzeka kuwe kuphela, kuthi sonke kusebenza kuphela njengoko kuchaziwe ngumphuhlisi, ke kungcono ugcine iikhomenti zakho kwaye ngakumbi iimfuno zakho, hayi ezomntu wonke, kuba xa uphupha ukuba iyakusebenzela kwizixhobo ezingasebenziyo. bane-OS okanye iinethiwekhi ezingasebenziyo kuzo.
«Gcina izimvo zakho» Iimbatyisi ukuba «yedemokhrasi» ... malunga nale ntombazana ...
Okokuqala, andikhange ndiyithande impendulo yakho undwendwelo kwisithuba sakho konke konke, kukho iindlela kunye neendlela.
Okwesibini, ndinayo iMac phakathi ku-2011 kwaye unokwenza kuphela kwaye ufumane iifowuni kuba, ngokungafaniyo neminye imisebenzi, ayisebenzisi iBluetooth kodwa ilayini yeWIFI.
Ah, ngoku ngohlaziyo lwamva nje lwe-iOS ungathumela kwakhona i-SMS !!!!!
Ewe, uluvo lomntu osebenza naye luchanekile, akukho mfuneko yokuba ibluetooth yakho iplagiwe, ukuba kwi-wifi enye kuninzi.
Amagqabantshintshi uCarmen akaphelelanga ndawo, zombini zikwimo nangesizathu.
Ewe, bandiphoxile ngendlela embi… .. Ndine-iMac ka-2011, i-top-of-the-range i7, ene-6970 Gb HD1M yemizobo, i-16 GB ye-RAM kwaye abazukundivumela ndisebenzise i-Handoff…. .
Bayandinyanzela ukuba nditshintshe ikhompyuter esephantsi kwewaranti, ngenxa yenyani elula yokuba isuka ku-2011, xa kusekho iiMacs ezingenamandla kangako ukusukela ngo-2013 okanye ngo-2014….
Bayeke benze ngee-mobiles, kulungile, kodwa nge-iMacs ...
Ndikwimeko efanayo nawe, kuye kwaba kukudana okukhulu ukubona ukuba andinakuvula i-Handoff kwi-iMac yam ... ngenxa yesi sizathu ndiyazibona iimfuno zehardware, ukuba le nkcukacha "zincinci" zishiyiwe ukuba zinike izimvo.
Kudala ndiphanda kwaye kubonakala ngathi inento yokwenza nohlobo lweBluetooth kwaye ngokucacileyo amandla ayo ...
Imibuliso kunye nombulelo ngegalelo lakho!
Ukusuka kwinto endiyibonayo zininzi izinto ezingasebenziyo ukuba iMac ayivelanga ngo-2012 okanye kamva, yimeko yam, ndinomoya ukusuka ekupheleni kuka-2010 kwaye ayikwenzi oko okanye i-AirDrop nge-iphone 6 yam
Kungenxa yokuba ndikufumanisa kulihlazo ukuba "bathathe" inkqubo yokusebenza kwe-desktop…. kwikhompyuter enamandla ngakumbi kunamanye ukusuka ngo-2014 ...
Kwizixhobo eziphathwayo, ndiyayiqonda into yokuba iOS capen, kodwa kwiidesktops kwaye obu bubhanxa, ndiyifumanisa ingenangqondo ,,,
Abana nto, badinga ibluetooth 4 okanye amandla asezantsi, bathi basebenzela ukuzama ukuyizisa kwi-macs ezindala, mhlawumbi kwixa elizayo.
Kwaye amandla asezantsi anento yokwenza nantoni na? Yiyo iMac eqhagamshelwe kwangoku echitha ngaphezulu nangayiphi na imeko, hayi i-iPhone ...
Kodwa kuya kunyanzela ukusebenzisa i-2.1 kwi-iphone. Yinkonzo esebenzayo ngokusebenzayo, ke ibhetri yeselfowuni ayinakukugcina nakwiiyure ezimbalwa. Ndifundile kwibhlog yokuba bakwazile ukuyenza ngokuthenga ipeni yeBluetooth 4.0, kodwa andazi ukuba zonke ziyahambelana.
NdineMacBook Pro ukusukela phakathi ku-2012 kwaye ngale mvakwemini ndiye ndenza kwaye ndafumana iifowuni ngeMac kodwa andikafumani kuqhubeka nokusebenza. Ndinayo yonke into emiselweyo.
IMacBook Pro yayiyeye yaphuma ngo-Okthobha okanye ngo-Novemba ka-2012, andikhumbuli owona mhla. Ndivavanya nge-iPhone 5 ene-iOS 8.0.2
Kubi kakhulu malunga neapile andizukuchitha i-2000 yeedola ukusebenzisa i-handoff
Iifowuni zisebenza ngokugqibeleleyo kum, njengoko kulindelwe, kukho amaxesha apho zingasebenziyo.
Ngokuphathelele kwi-handoff, isebenza ukusuka kwi-ipad okanye kwi-iphone ukuya kwi-imac kodwa ukusuka kwi-imac ukuya kwi-iphone andiyifumani i icon.
Ngaba uyazi ukuba kutheni kunokuba njalo
Isisombululo esibonelelwa yiApple kwingxaki yomnxeba ongadluliseli kwezinye izixhobo okanye awuziboni ii icon zeHandoff zezi:
1. Qiniseka ukuba izixhobo zisebenzisa i-iOS 8 okanye kamva; Ukwenza oku, yiya kuseto> Ngokubanzi> Uhlaziyo lweSoftware.
2. Jonga useto:
▪ Yiya kuseto> iWi-Fi kwaye uvule iWi-Fi, ukuba kukho imfuneko.
▪ Yiya kuseto> iBluetooth kwaye uvule iBluetooth, ukuba kukho imfuneko.
▪ Qiniseka ukuba izixhobo ze-iOS zidityaniswe kwinethiwekhi enye ye-Wi-Fi; Ukwenza oku, yiya kuseto> iWi-Fi kwaye uthelekise igama lenethiwekhi edityaniswe nganye nganye.
▪ Yiya kuseto> Ngokubanzi> Isandla kunye neapps ezicetyiswayo kwaye uvule iHoldoff.
▪ Yiya kuseto> Ifowuni kwaye ucime iWi-Fi Calling.
Ndiyathemba ukuba iyakusebenzela !!!
Molo ndine-ios 8.1 kunye ne-yosemite 10.10 kwaye andazi ukuba ndimele ndenze njani uHanoff asebenze ngaphandle kokuyisebenzisa kwi-iphone nakwi-mac. Ndisebenza ngaphandle kwe-wifi, oko kukuthi, uxhulumaniso ekwabelwana ngalo kunye nefoto ye-4g ye-iphone. Ndiqinisekile ukuba ndenza into engalunganga. Enkosi
Ewe, baqala ukungavumeli izinto kwiMacbook Pro ukusukela ngo-2011. Ifuna ntoni iApple, ikwasisinyanzela ukuba sitshintshe iMacbook Pro yethu esebenza ngokugqibeleleyo? Le nkqubo yokuphelelwa lixesha ukuba iApple iyisebenzise ngobukrakra indenza ndithandabuze ukuba ndiyaqhubeka na ukuthenga iimveliso zeApple. Xa ndithenga into ndiyayikhathalela ukuze isebenze kakuhle kum kangangoko kunokwenzeka, kwaye ngeApple andinakuyisebenzisa kuba bona baphethe "ukubonakalisa kude."
yojar onairam sitsho
Ndiyakhumbula xa iapile yonke into yayilula… aba bantu bazakusiphambanisa….
USteve Jobs wayedla ngokuthi "nathi senza njalo kodwa siyenza lula" kwenzeke ntoni kulonto !!
Phendula yojar onairam
Ewe, ndifumana kwaye nditsalela umnxeba ngokugqibeleleyo ngeWIFI phakathi kweMacBookPro ukusuka ngo-2010 kunye ne-iPhone 6. Yintoni engasebenziyo kukuqhubeka, kodwa iifowuni lubisi!
Bathi ukuba ubeka i-USB Bluetooth 4.0 yonke into iyasebenza.
Ndicinga ukuba esi sisombululo siza kunceda abantu abaninzi kwaye sigcine i $$$ ezimbalwa kwabo sele becinga ngokutshintsha i-BT.
Isandla silungiswe kwi-Mac Air 2011-kuvavanywa nge-iPhone 5s.
Into yokuqala njengoko kubonisiwe kwinkqubo, qinisekisa ukuba ibhodi yakho yeBluetooth iyahambelana ne-BT LE (ukuba ayisiyiyo, ungazami):
Kwi-MAC, yiya kwi icon yeapile, "Malunga nale Mac", "Ingxelo yenkqubo….", Khetha ukhetho "lweBluetooth" phantsi "kwehardware" kwaye ujonge ipharamitha "Ehambelana neBluetooth LE" ukuba ibe kwixabiso "Ewe ".
Umthombo kunye neekhredithi:
U-Eder Granda Mantilla sitsho
Molo, ndiwalandele amanyathelo okufundisa kwaye yonke into iyandisebenzela ngaphandle kokuba ndikwazi ukufowunela incwadi yam yencwadi ene-iPhone yesi-5 endilahlekileyo.Ndicela undincede
Phendula u-Eder Granda Mantilla
UOmar González Jadur sitsho
Molweni ndine-macbook pro mid 2012 i-retina 15 kunye ne-iphone 5s… Iifowuni azikho ngxaki kodwa ukuqhubekeka akukho nto ndiyenzileyo kwaye ayisebenzi… Itoti !!! Ndiyathemba ukuba ungandinceda!
Phendula uOmar González Jadur
UHector Segarra Barron sitsho
Ewe, nam sele ndibone ikhithi ukuyiguqula kwaye ndakwazi ukusebenzisa i-mac ngaphandle kwengxaki, sendichithe kunye ne-iphone 6 nangaphandle andiweli kwinethiwekhi yokutshintsha i-iphone 5s yam kwakhona kuyilo olunjenge Sam, ngaphandle kokuba babe bahle kangaka baqala ukundoyikisa …….
Phendula kuHector Segarra Barron
Alito (@Ali_yeal) sitsho
Sele ndinaso isisombululo, esenzeke kum, yonke into abayithethayo, enkosi, ngokukhangela kunye nokufunda okufundayo. Into ekufuneka yenziwe kukuseta kwakhona inkumbulo ye-PRAM ye-Mac, ukusukela ngo-2011 ukubheka phambili. Kodwa kuqala, kufuneka ucime ifolda ngolu hlobo lulandelayo:
Sifaka i-hard drive (ngesiqhelo iMacintosh HD), ukusuka apho siye kwiThala leencwadi, kwaye ekugqibeleni sivule ifolda yokuKhetha.
Ngoku siyasusa ifolda yoCwangciso lweNkqubo, ngaphandle koloyiko, iya kusicela kwimvume yomlawuli kodwa akukho nto, ukuyilahla.
Emva koko siyicima ikhompyuter okanye ukuqala kwakhona kwaye ngaphambi kwesandi sokuvula ngokucinezela cmd + alt + P + R amaqhosha, inzima kodwa inokwenziwa. Ngelixa sicinezela olu dibaniso, izixhobo ziya kuvula amatyeli aliqela ukufikelela kuphela kwinxalenye evakala i- "GONG" ukuyibiza, siyigcina icinezelwe kude kube kuvakala amaxesha ama-3. Enye inkcukacha, kufuneka ibe yi-alt ekhohlo.
Nje ukuba kuvakale ixesha lesithathu siyeke kwaye iqela liqhubeke ngokuqala ngesiqhelo.
Ilungile, ingxaki isonjululwe.
Konke kulele kwi-BT
Phendula kuAlito (@Ali_Dalay)
Ndine-macbook pro mid 2012, i-iphone 5s kunye ne-ipad mini enesikrini se-retina, kodwa ngaphambili isandla phakathi kwe-mac kunye ne-iphone besisebenza kakuhle kum, ngoku ayisasebenzi ukuba iyadibana phakathi kwe-iphad iphone kunye ne-vice versa kodwa ayivumeli ukudibanisa ne-mac, nabani na unesisombululo? kwaye ayingombuzo woqwalaselo kuba sele ndilungiselele ukususwa kwi-idevice emithathu kwaye ndinayo i-id efanayo ye-Apple, inethiwekhi efanayo ye-wi-fi kwaye zonke zontathu zineBluetooth
kunye nee guio sitsho
Molo ndine-iPhone 4 kunye neMacBook Pro 2014 abafuni kusebenza, kwi-iPhone yam ayinasandla
Phendula u andres guio
Molweni nonke kwaye enkosi kwangaphambili!
Ndinengxaki ne-Hotspot yobuqu ye-iphone yam 6. Ayisebenzi kum, kuphela i-icon ye-Loading ivela kwaye ayindivumeli ukuba ndiyisebenzise ukuze ndibelane nge-intanethi. KwaApple bandixelele ukuba inkampani yam yeefowuni kufuneka iyenze ingabinanto. Udadewethu uneSamsung enenkampani efanayo kwaye iyamsebenzela.
Ukuba umntu ebenokwazi ukundinceda ndingayixabisa kakhulu!
I-Apple SIM, iSIM enye kuye nawuphi na umsebenzisi
Ukuba iividiyo ezihamba kancinci kwi-flicker yakho ye-iPhone, ungakhathazeki, ayophukanga